China Dog poop bag dispenser metal Pita n'efu ojii na ihe ịrịba ama board emepụta na suppliers | Shengrui
Dog poop bag dispenser metal Pita n'efu ebe na ịrịba ama board
Doglọ nkịta a na-ere anụ ụlọ nkịta a na-enye ogo dị elu na ọnụ ahịa akụ na ụba. Doglọ nkịta nkịta anyị nwere ihe na-abụghị nke na-agwụ ike, nke na-enweghị nchara, nke azụmahịa, ike dị elu Aluminom. Inogide, dị irè na mfe amata
Size: 190cm H.Package: 1set / katọn.
Ahaziri imewe, ngwugwu, na agba ga-anabata.
Doglọ nkịta a na-ere anụ ụlọ nkịta a na-enye ogo dị elu na ọnụ ahịa akụ na ụba. Doglọ nkịta nkịta anyị nwere ihe na-abụghị nke na-agwụ ike, nke na-enweghị nchara, nke azụmahịa, ike dị elu Aluminom. Ihe mkpofu a na-ekpuchi ekpuchi nwere ike inye 10-Gallon nchekwa nchekwa ma nwee ihe pụrụ iche nwere ike ijikọta ihe eji eme ya, iji chekwaa akpa mkpuchi ma gbochie ihe ọ bụla. Doglọ ọrụ nkịta ọ bụla na-agụnye ihe ọ bụla ị ga-achọ, site na ntuziaka ndị dị mfe iji wụnye akpa ntinye akpa gị, akara ebe a na-ekpofu nkịta, ma nwee ike ịmegharị ihe iji malite ịmalite! Adịla na-nzuzu na-emefu ihe karịrị I nwere!
Nke gara aga: Metal isi ogbe & Dog Leash hanga
Osote: Ihe nkwụnye ihe nrite RUNNER
okomoko kpọlitere nkịta udia nnukwu efere feeder wate ...
Metal isi ogbe & Dog Leash hanga